[ikhodi] [/ ikhodi]
"Eminyakeni engamashumi amane - impilo isanda kuqalwa" - le ngqikithi evelele ye-movie isibe isiqubulo esibalulekile sezinkulungwane zobuhle obuhle kakhulu emhlabeni jikelele. Futhi ngempela, idatha yepasipoti - akuyona isizathu sokushiya izitayela zefashini, kodwa ikhabethe lakho liyakudinga ukubuyekezwa. I-Crop-topam, i jeans enezigqoko, amabhantshi-amabhantshi kumele kuthiwa "cha." Indlela yokugqoka owesifazane iminyaka engama-40 - uyazi kahle umdwebi odumile nesitayela sikaVictoria Beckham. Izingubo zokugqoka-amacala, amabhantshi amahle, amahembe amhlophe azoba yisisekelo seminsalo emangalisa. Lezi zinto zizoqabula futhi zigcizelele ubuhle bemvelo bomnikazi wayo.
Isitayela se-Monochrome nezithombe ezinhle - ngakho gqoka abesifazane abaphumelelayo abangaphezu kuka-40
U-Jennifer Aniston - omunye ubuhle, osekuvele ... Kodwa-ke, noma ngabe iminyaka yakho isondela ngokulingana nomuntu oneminyaka engu-50, lokhu akusona isizathu sokushiya i-jean oyikhonzile noma ubude obude ngaphezu kwamadolo. Umzuzwana oyinhloko lapha inhlanganisela efanelekayo yezinto. Ukukhokhela iziketi ezifushane kanye ne-jeans e-skinny egcizelelwe ngezinto ezinhle zezingubo zokugqoka: ijazi noma i-cardigan, ama-tops abizayo nama-blouses, izicathulo ezinhle.
UJennifer Aniston uyisibonelo esihle sokugqoka ngesitayela se-women's cache for 40
Futhi kanjani ukugqoka owesifazane iminyaka engu-40 ngobubunjwa obuhle? - Lo mbuzo uphendulwa ngumdlali we-comedian umculi uMelissa McCarthy. Izithombe eziningi ezifihlekile ezifihla iziqhwa eziluhlaza kanye nesisu, ama-blazers we-cut cut kanye nama-trousers amancane, agqoke ama-maxi egqoke ngesihenqo esiphakeme futhi-ke, izicathulo eziphakeme kakhulu, ezibukeka ngokukhipha umdwebo - lokhu kuyindlela yokuhleleka yabesifazane abakhulile abangaphezu kuka-40.
UMelissa McCarthy uyisibonelo sokugqoka ngendlela efanele abesifazane besifazane abahle kakhulu
Izingubo ezinhle ekhaya
Gqoka ukuze uthole ama-cocktails ngezingubo zokugqoka
Indlela yokukhetha isiketi esifanele salesi sibalo
Isivikelo esihle kunazo zonke emelene nomkhuhlane nomkhuhlane
Indlela yokubuyisela imizwa kumuntu othandekayo
Natalia Oreiro - biography ephelele
Indlela yokujwayela kahle abazali bomyeni
Inkukhu namazambane kuhhavini